Semalt: Zvakakosha Kubvisa Nhamba dzeGoogle Analytics Tracking Kubva paIndaneti
Max Bell, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutungamiri, anoti kana pazvinouya pakudzivirira Google Analytics panguva yekuedzwa kwemasimiti uye kwete-static sites, tinogona kuwana mazano mazhinji, zvishandiso, mazano , uye mazano. Kazhinji kazhinji, isu tinokumbirwa kuti tifunganidze iko kuburikidza neP IP kana kuti tisa matanho akasiyana-siyana emitambo kune injini inowanika mawebsite.
Ndiregei pano kuti ndikuudzei kuti nzira yepakutanga uye yakatendeseka yekuita kuti Google Analytics yakogadziriswe ndeyokudzorera zvikumbiro kune webhusaiti yepamusoro yeGoogle Analytics. Ichokwadi kuti inoshanda pazvinhu zvose zvekodhi uye zvigadzirwa zvemagetsi, asi iyo nzira hairevi chinhu kana tichiedza iPhones nedzimwe madivayiri e-Wi-Fi. Zvinogadziriswa zvekuongororwa kwenharaunda ndezvokuti shandise mazano echikwata zvemunharaunda yako yepakombiyuta uye mapurojekiti, uye zvino tsvaga zvishandurwa zvewebsite yako kuitira kuti zvigadziridzwe maviri esefoni uye makombikiti. Nokuda kwechikonzero ichi, ndinonyanya kushandisa majeti ejeribreaking uye mafaira epa iPhones pasina ma filters. Ndakaedza zvakare Xip uye Adobe Shadow. Nezvo, ndakanga ndisingakwanise kuisa mapepa eI IP nokuti ndaive ndichiita izvi pamba. Kunyanya, maIPs angu haana kupa chero kero ye static yekamuri yekugara.
Ndakaedza kuisa tsika dzisingabatanidzi uye tsika dzinosanganisira kushambadza kazhinji paGoogle Analytics. Izvi zvinoita kuti purogiramu yangu iwane unhu hutsika uye maonero ehupenyu kubva kune dzimwe nzvimbo. Iniwo ndinogadzirisa tsika dzinoshandiswa maererano nehostnames yangu, uye dzinofanidza maitiro eGoogle Analytics nenzira iri nani. Nekutaura kutaura, zvingava zvakaoma kwatiri kutarisa mazita evanhu vematunhu ekutanga pakutanga. Zvisinei, kana waita shanduko yakakodzera, iwe unogona kuwana mhinduro dzinoda nyore nyore. Nguva pfupi mushure mokubvisa maGoogle Analytics ekutsvakurudza mazano kubva pawebsite yangu panguva yekuchengetedza nekugadzirisa zvakare, ndaigona kuona kuti mafaira angu ari kushanda zvakanaka uye migumisiro yekupedzisira inoshamisa.
Usabvisa kutendeuka kwako kubva kuGoogle Analytics
Hazvizove nyore kuisa mararamiro ako kubva kuGoogle Analytics kusvikira wapedza kuchinja kwakakodzera. Kuita izvi kunogona kukanganisa huwandu hwemigwagwa uye nhamba dzewebsite yako. Kunyangwe muchikwata chekutanga chekutsvaga kwesaiti, haungagamuchiri maonero akawanda kunyange kana waita injini yekutsvaga. Pane nzira dzakasiyana dzekudzivirira iwe pachako hits kubva pakuongororwa neGoogle Analytics. Nzira imwe neimwe yega yega inobatsira uye yakaipa, saka zvingava nyore kwauri kuti usarudze yakarurama maererano nezvinodiwa. Shanduro yechipfuva kana nzira dzakasununguka ndiyo nzira inoshamisa uye inofadza. Basa ravo rinotora nguva, asi magumo ekupedzisira anogara akaisvonaka. Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kuisa kodeti yekutsvakurudza yeGoogle Analytics pawebsite yako ye HTML code uye wodzokera kune seva yako kuti unogadzira mamwe mafiridzi akakodzera. Imwe nzira ndeyekutsvaga kweGoogle Analytics inokuita kuti urege kushanyira iwe pachako uye kugadzirisa zviyero zvewebsite yako maererano neat IP. Iyi nzira ichagadzirisa zvizhinji zvehutano hwako hwep IP uye inogona kukupa iwe unhu hutsika Source .